VaChihuri Vanomiswa Pamberi peMakomiti Maviri eMatare eParamende
Mukuru wemapurisa, Police Commissioner General August Chihuri, vanoti bato reMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai ndiro riri pamberi mukukonzeresa mhirizhonga iri kuitika munyika. VaChihuri vataura mashoko aya pamberi pemakomiti maviri ematare eparamende anoona nezvekuchengetwa kwemukati menyika.
VaChihuri vaudza komiti idzi kuti pamhaka dzakaparwa zana nemakumi maviri neimwe, maka zana neimwe dzakaparwa neMDC-T, dzimwe makumi maviri dzikaparwa nevanhu veZanu PF. Vatiwo pavakuru veMDC vakapara mhosva, kana kukonzeresa mhirizhonga, vanosanganisira mutevedzeri wemutungamiri wehurumende, Muzvare Thokozane Khupe, sachigaro wekomiti yezvemukati menyika, VaPaul Madzore, pamwe nasachigaro weCOPAC, VaDouglas Mwonzora. Asi VaChihuri havana kudoma nhengo dzeZanu PF huru dzinonzi dzakakonzeresa mhirizhonga.
Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti danho ratorwa nemakomiti eparamende rekuda kunzwa kubva kumapurisa pamusoro pemhirizhonga iri kuitika munyika, rakanaka asi chete kuti makomiti eparamende aya haana mazino ekuruma vanoazvidza.
Mashoko aya anotevera mhinduro dzinonzi dzapiwa naVaChihuri pavamira pamberi pemakomiti aya vachipa humbowo pamusoro pemhirizhonga iri kuitika munyika.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari Programs Manager weCrisis in Zimbabwe Coalition, VaPedzisai Ruhanya, vaudza Studio7 kuti mhinduro dzaVaChihuri ndedzekuzvidza makomiti aya.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika, VaCharles Mangongera, vanotiwo makomiti aya anofanirwa kupiwa masimba ekuranga vanenge vaazvidza.
Hurukuro naVaPedzisai Ruhanya Pamwe naVaCharles Mangongera